Croce di Gesù appare in Cielo testimoni migliaia di persone si grida al miracolo | Ilblogdellapreghiera
Ọnwụ nke Jizọs pụtara n’eluigwe na-ahụ ka puku kwuru puku ndị mmadụ tiri mkpu n’ọrụ ebube ahụ
Foto a anyị hụrụ bụ nke Eluigwe nke Medjugorje ebe Madonna nọ na-egosi kemgbe ọtụtụ afọ. E nwere ọtụtụ ihe akaebe banyere ihe egwu na-eme ebe ahụ.
Akaebe Alessia nke 1986 mgbe ọ dị afọ 8:
Atụgharịrị m wee hụ ihe dị ịtụnanya: ma anyanwụ dị na-achagharị ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Nke mbụ bụ acha anụnụ anụnụ, mgbe ahụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mgbe ahụ edo edo, ọ na-agbago elu na ala wee site n'aka nri gaa n'aka ekpe, na-akanye obe dịka ọ ga-agọzi anyị. Anyị guzosiri ike na-ekiri, nwee obi ụtọ ma kwaga; Anyị achọghị ịpụ ọzọ, mana ọ na-erute n'uhuruchi, anyị na ndị ọzọ bọs na-aga. Ná mgbede ahụ niile na akụkụ abalị m chere banyere ihe ịrịba ama ahụ dị ebube ma ugbu a, mgbe ahụ m na-eche banyere ya: ọ mara mma nke ukwuu.
Ozi ụfọdụ nke nne anyị nwanyị nyere ndị ọhụụ Medjugorje ndị na-ekwu maka ihe ịrịba ama dị nsọ nke ọ na-enye:
Ozi edere na July 19, 1981
Ọbụna mgbe m hapụrụ akara ahụ m kwere gị nkwa n'ugwu, ọtụtụ agaghị ekwenye. Ha ga-abịa n’elu ugwu, ha ga-egbu ikpere n’ala, ma ha ekweghị. Ugbu a bụ oge iji tọghata ma mee penance!
Machị 8, 1982
You juo m ihe ịrịba ama iji kwere na ọnụnọ m. Ihe ịrịba ama a ga-abịa Ma ịchọghị ya: gị onwe gị ga-abụrịrịrị ndị ọzọ akara!
Septemba 2, 1982
Mee ọsọ ọsọ na ntughari! Mgbe ihe ịrịba ama ahụ ekwere na nkwa pụtara n’elu ugwu ọ ga-anọ ọdụ. Oge amara a bu ezigbo ohere inwere itughari ma nwekwuo okwukwe gi.
Ozi akara ụbọchị nke iri na atọ nke ọnwa iri na atọ n’afọ 23
Ihe nzuzo niile m zochiri ga-emezu ma ihe ịrịba ama a na-ahụ anya ga-egosipụtakwa onwe ya, mana echela ka ihe iriba ama a mee ka afọ ju ọchịchọ gị. Nke a, tupu ihe ịrịba ama a na-ahụ anya, bụ oge amara nye ndị kwere ekwe. Yabụ tugharia ma nwekwuo okwukwe! Mgbe ihe ịrịba ama a na-ahụ anya ga-abịa, ọ ga-anọrịrị ọdụ karịa ọtụtụ.
Machị 15, 1984
«Ifufe bụ ihe ịrịba ama m. Mgbe ikuku fechara mara na m nọnyeere gị ”.
Ozi e dere n’ụbọchị Ọgọst 25, 2003
Umu umuaka, a na m akpoku unu taa ikele Chineke n’ime obi unu niile n’ihi onodu oma o na-enye unu site na ihe iriba-ama na udidi ndi di n’uwa. Chukwu chọrọ ịbịaru gị nso ma na-agba gị ume inye ya otuto na otuto. Ya mere ana m akpọku gị ọzọ, ụmụ, kpee ekpere, kpee ekpere, kpee ekpere ma echefula: m nọnyeere gị! M na-arịọchitere Chineke arịrịọ n’onye ọ bụla n’ime gị ruo mgbe ọ yourụ gị nwere n’ime ya juju. Daalụ maka ịza oku m
← Na post gara aga Gara aga post:Saint Gregory VII, Saint nke ụbọchị nke ụbọchị iri abụọ na atọ nke iri abụọ na atọ
Ọzọ Post → Post ozo:Naples tiri mkpu na ọrụ ebube Padre Pio: "n'ime ụlọ ịwa ahụrụ m, mọnk dị nso"